आज रातिबाट मौन अवधि शुरु हुँदै, के गर्न पाइन्छ , के गर्न पाईदैन ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
आज रातिबाट मौन अवधि शुरु हुँदै, के गर्न पाइन्छ , के गर्न पाईदैन ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको माघ ९ गते बिहीबार हुने निर्वाचनको सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुँदैछ । निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम ४८ घण्टा अगाडी आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुने आयोगले जनाएको छ ।